I-N95 Mask, Ubuso Bemaski, I-Mask Yokuhlinzwa, I-Medical Mask - i-Nuomigao
I-Fujian Nuomigao Medical Technology Co, Ltd ngumkhiqizi ochwepheshe wokunakekelwa kwempilo yomuntu siqu kanye nomamaski wezokwelapha, eziqhayisa indawo yokusebenzela ejwayelekile yanamuhla, imishini yokukhiqiza ethuthukile kufaka phakathi nomshini wemaskhi ozenzakalelayo, imishini yomshini we-automatic N95.
Ngokwezidingo zakho ezenziwe ngabantu, sizokunikeza ngezinsizakalo zokubonisana eziqeqeshiwe
Sikunikeza hhayi kuphela imikhiqizo, kepha futhi nezixazululo ezisezingeni eliphakeme nezinsizakalo zomkhiqizo
Thola isitifiketi sokubhaliswa kwensiza yezokwelapha, isitifiketi se-CE kanye nesitifiketi se-FDA
Isungule uhlelo oluphelele lwesakhiwo kanye nenethiwekhi ebanzi yokuthengisa, futhi isungule ubudlelwano obuhle bokusebenzisana namabhizinisi amaningi
Ungesabi! Umthamo we-Mask uyalulama
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwesimo sobhubhane, ukusetshenziswa kwamamaski kukhuphuke kakhulu. Njalo lapho kukhiqizwa imaski kuvikela ukuphepha okwengeziwe kubantu nakubasebenzi bezokwelapha. Iminyango enekhono kanye namabhizinisi wokukhiqiza ahlobene nawo agijimisana nesikhathi. Ngokwemininingwane yakamuva, kusukela ngoFebhuwari 7, izinga lokuqalisa kabusha kwamabhizinisi kamaskandi ezweni lonke lifinyelele kuma-73%.
02 2020 / Ephreli
okufanele sazi masks kanjani ukugqoka imask? (yenza futhi ungakwenzi)
phenya umbala: kumele uhlale endaweni ngaso sonke isikhathi: ungalokothi uwudilize lapho ushiya ikamelo, noma lapho ukukhuluma kwakho nesiguli noma nje ufuna ukuphefumula lula kuyini imaski elungile? ngokohlobo lwenqubo: izinga lokuvikelwa (eliphansi, eliphakathi nendawo noma eliphakeme) induduzo futhi kufanelekile: ekhaleni ekhululekile ucezu lwe-tha ...
Ukubuyiswa kabusha kwemaski kweChina emhlabeni: Ukukhiqizwa kweMamask kwenza ingxenye yesine yokuthumela emhlabeni
Njengoba ukufunwa komhlaba kwamamaskhi kuqhubeka ukwanda, izwe laseChina manje selingancishiswa kancane kancane. UTan Qunhong, imenenja jikelele yomkhiqizi omncane wemaski eCentral China, uthe usephothule i-oda lokuthenga likahulumeni waseChina futhi useqala kabusha ukuthunyelwa kwamanye amazwe. E-additi ...